सार्वजनिक भयो पी. खनालको ‘हाम्रो देश नेपाल, हामी नेपाली’ (भिडियोसहित)
२०७६ असोज १ गते १०:३१
काठमाडौं । गीतकार गोपाल पी. खनालको ‘हाम्रो देश नेपाल, हामी नेपाली’ नामक नयाँ गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । बरिष्ठ गीतकार तथा कवि रत्नशमशेर थापा, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल, प्राध्यापक डा. गोविन्द प्रसाद आचार्य, संगितकार वसन्त सापकोटा र पत्रकार ऋषि धमलाले संयुक्त रुपमा उक्त म्यूजिकभिडियोको संयुक्त विमोचन गरेका हुन् । उक्त म्यूजिक भिडि ... read more...
यस्तो छ उज्वलको ‘तिमी र म’ (भिडियोसहित)
२०७६ असोज १ गते १०:१९
काठमाडौं । उज्वल गिरीको स्वर, शब्द र सङ्गीत संयोजन रहेको गीत ‘तिमी र म’ को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । लोचन घिमिरेको सङ्गीत निर्देशन रहेको ‘तिमी र म’ गीतको भिडियो रुपेन पौडेलको निर्देशन, छायाँकन र सम्पादन रहेको छ । गीतको भिडियोमा दीप गिरी र पासाङ गुरुङलाई फिचर्ड गरिएको छ । गीत जति राम्रो छ गीतको भिडियो पनि त्यतिकै उत्कृष्ट बनेको छ । राजिब शेरचन थाकाली सहायक छायाँ ... read more...
प्रदेश मिस तामाङको उपाधि हिलेकी प्रजितालाई
२०७६ भदौ ३० गते १०:५४
धनकुटा । 'मिस तामाङ प्रदेश-१' को ताज धनकुटा हिलेकी प्रजिता तामाङले पहिरिएकी छन् । नेपाल तामाङ घेदुङ संघ उर्लाबारी मोरङको आयोजना तथा नेपाल तामाङ घेदुङ जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाको सहआयोजनामा सम्पन्न भएको ग्राण्ड फिनालेको अन्तिम पाँचमा पर्न सफल प्रजिताले मुख्य निर्णायकको प्रश्नोत्तरमा उत्कृष्ट हुँदै ताज पहिरिएकी थिइन् । उनले विभिन्न जिल्लाका १३ स्पर्धीलाई पछि पार्दै ताज पहिरिएकी हुन् । प्रजिताले व्य ... read more...
पेमाको 'सउल घुम्न जाँदा' सार्वजनिक (भिडियोसहित)
२०७६ भदौ ३० गते १०:३९
काठमाडौं । गायक पेमा वाईबाको नयाँ गीत तामाङसेलो 'सउल घुम्न जाँदा' को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उक्त गीतको शब्द र संगीत समेत गायक पेमाकै रहेको छ । उक्त गीत मन छुने खालको कर्णप्रिय रहेको छ । म्यूजिक भिडियोमा गायक पेमा र नानु पुनलाई देख्न सकिन्छ । उक्त म्यूजिक भिडियोमा रिकमान थापा मगरको निर्देशन, विशान काउचाको छायाँकन र दिपक विष्टको सम्पादन रहेको छ । भिडियो: ... read more...
साँस्कृतिक महामेला-२०१९ तथा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रमको तयारी पूरा
२०७६ भदौ २२ गते ०९:३९
दक्षिण कोरिया, सउल । 'नेपाली सांस्कृतिक महामेला-२०१९ तथा स्रष्टा सम्मान' कार्यक्रमको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको राष्ट्रिय संगीतकर्मी संघका महासचिव तथा कार्यक्रम संयोजक बिक्रम जङ्ग शाहले बताएका छन् । नेपालको पर्यटन वर्ष २०२० लाई सफल पार्नका लागि राष्ट्रिय संगीतकर्मी संघको आयोजना तथा पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम हुन लागेको हो । कार्यक्रमको उदेश्य कोरियन नागरिकहरुलाई नेपाल भ्रमणका लागि प्रोत ... read more...
काठमाडौं । गीतकार विमला तुलाचनको गीति एल्बम ‘मेरी आमा’को लोकार्पण गरिएको छ । राजधानीको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा विशेष समारोहका बीच एल्बमको लोकर्पण गरिएको हो । गीतकार सङ्घ नेपालको आयोजनामा भएको समारोहमा प्रमुख अतिथि सङ्घका सल्लाहकार, पूर्वमन्त्री तथा प्रतिष्ठीत गीतकार एसपी कोइराला, गीतकार सङ्घ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष शुभ मुकारुङ, विशेष अतिथि प्रतिष्ठीत कवि, गीतकार ... read more...
काठमाडौं । गीत लेखेर एकपछि अर्को किर्तिमान कायम गरेका छन् डा. डीआर उपाध्यायले । उनले वल्र्ड बुक्स अफ अमेरिका, अष्ट्रिेलिया, वल्र्ड बुक्स अफ लण्डनलगायत विभिन्न देशबाट वल्र्ड रेकर्डको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । ७ गीति एल्बमका ३६ ओटा गीत एकै पटक सार्वजनिक गरेर उपाध्यायले मिराकल वल्र्ड रेकर्ड, इण्डिया स्टार वल्र्ड रेकर्ड, एक्सकुलुसिभ वल्र्ड रेकर्ड, जीनस वल्र्ड रेकर्ड र एभरेष्ट वल्र्ड रेकर्डको प्रम ... read more...
काठमाडौं । चलचित्र ‘जीवन काँडा कि फूल’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा मङ्गलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी निर्माण पक्षले चलचित्रको ट्रेलर र चलचित्र आउने मिति सार्वजनिक गरेको हो । निर्माण पक्षले चलचित्र कार्तिक २२ गते आउने घोषणा गरेको छ । चलचित्रको ट्रेलरलाई नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका उपाध्याक्ष मोहन निरौला, जीवन काँडा कि फूलका निर्माता तथा निर्देशक विनोद विष्ट, निर्देशक समाजक ... read more...
काठमाडौं । चलचित्र ‘पासवर्ड’ को ट्रेलर रिलिज सार्वजनिक भएको छ । उक्त फिल्ममा अनुपविक्रम शाही, विक्रम जोशी, वुद्दि तामाङ, रविन्द्र झा, धिरेन शाक्य, प्रविण खतिवडा, लिजा सुनार, छुल्ठिम गुरुङ, परि रानालगायतको अभिनय देख्न सकिन्छ । फिल्मको कथा बस्तु साउथ इण्डियन फिल्मशैली प्रस्तुत गरिएको ‘चलचित्र पासवर्ड’ को ट्रेलर हेरेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । ट्रेलर हेर्दा चलचित्रमा हाइटेक प ... read more...
काठमाडौं । बाल गायक प्रिन्स सिलवालको नयाँ गीत बाबा को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । जसमा प्रिन्स सिलवाल र चर्चित अभिनेता सरोज खनालको अभिनय देख्न सकिन्छ । शनिबार सार्वजनिक भएको उक्त गीतलाई भवानी अधिकारीले लेखेका हुन् भने गीतमा प्रेम घिमिरेले संगीत दिएका छन् । उक्त गीतको म्यूजिक एरेञ्ज भने युवा गायक, संगीतकार दिनेश न्यौपानेले गरेका हुन् । राजेन्द्र पाण्डे र राजकुमार तामाङको निर्देशनमा बनेको उक्त ... read more...
काठमाडौं । चलचित्र 'प्रेम गीत-३' को शीर्ष गीत 'हर युग होस प्रेमको गीत' को रेडियो नेपालमा आज लाइभ रेकर्डिङ कार्य सम्पन्न भएको छ । करिब ८० जना भन्दा बढी बाध्यबाधक र कलाकारहरुको सहभागितामा उक्त गीत रेकर्ड भएको हो । संभवत यसरी यतिधैरै कलाकार र बाध्यबाधकसहित लाइभ रेकर्ड भएको गीत यो नै पहिलो हुनसक्छ । अहिले बजारमा चलेको गीत भन्दा पृथक किसिमले अर्केस्ट्रासहित बाध्यबाधकहरुको संलग्नतामा रेकर्ड भएको उक्त गी ... read more...
काठमाडौं । गायक रोशन बालुवा र गायिका स्मृति बोहराको ‘फूलमती’ नामक नयाँ गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । चर्चित संगीतकार टंक बुढाथोकीको युट्युब च्यानलमार्फत उक्त गीत सार्वजनिक भएको हो । डि.पी. खनालको शब्द रचना रहेको उक्त गीतमा रोशन बालुवाले नै संगीत भरेका छन् । त्यस्तै, गीतको एरेन्ज नरेन्द्र वियोगीले गरेका हुन् । उक्त गीतको कोरियोग्राफी भने मोडलसमेत रहेका सागर कार्कीले गरेका ... read more...
काठमाडौं । विसंगती र बिकृति विरुद्ध तीखो प्रहार गर्दै तीजको अवसरमा कवि, गीतकार एवं साहित्यकार सुरेन्द्र महर्जन 'अमर' को रचना रहेको नयाँ गीत 'छमछ्मी नाच्ने कमर भाँच्ने' को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । राम कार्कीको संगीत रहेको उक्त गीतमा राम कार्की, सुरेश थापा, अनिता दंगाल र शान्ता कार्कीको स्वर रहेको छ । भिडियोको निर्देशन सुरेश थापाले गरेका हुन् भने अभिनयमा दर्शने भनी चिनिने हाँस्य कलाकार सुरे ... read more...
काठमाडौं । गायक नारायण थापाको मर्मस्पर्शी गीत ‘दिलमा आगो’ को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गीतको भिडियोमा त्रिकोणात्मक प्रेम दर्शाईएको छ । गायक थापाद्वारा सार्वजनिक गीतले युट्युबमा छोटो अवधिमा नै निकै लोकप्रियता हासिल गरिरहेको छ । मार्मिक शब्द र संगीत रहेको गीतको भिडियोमा लोक मिश्र, सुस्मिता अधिकारी र अनुज शर्माको अभिनय रहेको छ । भिडियोको निर्देशन सुवास प्रधानले गरेका हुन ... read more...
काठमाडौं । हिजोआज दैनिक एउटा तीजको नयाँ गीत सार्वजनिक भइरहेको छ । तीज गीतमा गायक तथा गायिकाले आ आफ्नै तरिकाबाट विषय बस्तुलाई उठान गर्दै समाजलाई सूसुचित गरिरहेका छन् पनि । यस्तै भिडमा गायिका तथा गायकहरु क्रमशः तेजवती जोशी, अस्मिता श्रेष्ठ, रबिना श्रेष्ठ, राजेन्द्र श्रेष्ठ र तिलक सुब्बाको स्वरमा सजिएको गीत 'तीजमा रमाउँला' को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उक्त गीतको संगीत राजेन्द्र श्रेष्ठको ... read more...
काठमाडौं । गायिका सोनी राजभण्डारीको आधुनिक नयाँ गीत 'साटौंकी मेरो मन' को म्यूजिक भिडियो डिजिटल बजारमा आएको छ । गीतमा शब्द र संगीत अविदको रहेको छ भने म्यूजिक संयोजन संजिव बराइलीले गरेका हुन् । भिडियोमा मोडेल मनिषा सापकोटाको अभिनय देख्न सकिन्छ । भिडियोको निर्देशन, छायाँकन र सम्पादक क्रमशः सुवास प्रधान, रामकुमार केसी र टेकेन्द्र शाहले गरेका हुन् । भिडियो: ... read more...
काठमाडौं । बालबालिकाहरुका लागि लक्षित गरेर एपिसी नेपाल नाम गैरसरकारी संस्थाले बाल गीतहरुको सँगालो ‘हाम्रो आवाज’ सार्वजनिक गरेको छ ।शनिबार काठमाडौंमा एक समारोहबीच संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति नारायणभक्त श्रेष्ठ, गीतकार डा. मुकुन्द पथिक, प्राज्ञ चुणमणि बन्धु, बरिष्ट गायक प्रेमध्वज प्रधान र संगीतकार जुगल डंगोलले उक्त गीति सँग्रह संयुक्त रुपमा बिमोचन गरेका हुन् । सडक बालबालि ... read more...
काठमाडौं । चर्चित गायिका टिका प्रसाईं र गायक संजीव पराजुलीको नयाँ गीत 'हातमा घडी' को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । भिडियोमा अलिशा शर्मा र प्रदिप बास्तोलाको अभियनय देख्न सकिन्छ । रमेश दाहालको शब्द रहेको उक्त गीतको संगीत राजनराज सिवाकोटीको रहेको छ । म्यूजिक भिडियोलाई शान थापाले निर्देशन गरेका हुन् भने सम्पादन र छायाँकन क्रमशः सुप्रिम पराजुली र अर्जुन तिवारीलगायतले गरेका हुन् । यसअघि पनि यो जोडील ... read more...
काठमाडौं । महिलाहरुको महान पर्ब हरितालिका तीज नजिकिदै गर्दा तीजका गीतहरु धमाधम सार्बजनिक भैरहेका छन् । यसै क्रममा चर्चित गायिका तथा नायिका तुलसी क्षेत्रीको तीजको गीत 'नामर्द पोइ' को म्यूजिक भिडियो सार्बजनिक भएको छ । एउटा बिवाहित नारीलाई बच्चा नहुनुको पीडा कति हुन्छ त्यो नारीलाई मात्रै थाहा हुन्छ यस्तै विषयबस्तुलाई समेटिएर बनाइएको क्षेत्रीको उक्त गीत नामर्द पोइमा तुलसी क्षेत्रीको स्वर रहेको छ ... read more...
काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' की नातिनी स्मिता दाहालको नयाँ गीत 'मायालु कता छौं' को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । नेपालीपन र लोकलयमा रहेको उक्त गीत सार्वजनिक भएको २४ घण्टामै ५ लाख बढीले हेरिसकेका छन् । उक्त गीतमा स्मितालाई राजनराज सिवाकोटीले साथ दिएका छन् भने संगीत पनि उनैको रहेको छ । उक्त गीतको शब्द दिनेश थपलियाको रहेको छ । उक्त भिडियोमा सरो ... read more...